पण्डित भिमकान्त पन्थीसँग अन्तर्वार्ता : जात प्रथाको भण्डाफोर गरौँ, ‘म मनुस्मृतिको विरोधी हुँ’ | Diyopost
पण्डित भिमकान्त पन्थीसँग अन्तर्वार्ता : जात प्रथाको भण्डाफोर गरौँ, ‘म मनुस्मृतिको विरोधी हुँ’
दलितमाथि कुटपिट र हत्याका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । दलितमाथिको विभेद हिन्दु धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ । के हिन्दु धर्मशास्त्रकै कारण समाजमा विभेद बढिरहेको हो? यस्तो बिभेद दलितहरुले कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो? विश्व हिन्दु महासंघ तथा हिन्दु धर्म रक्षा परिषद (एच.आर.पी) नेपालका केन्द्रिय सदस्य एंव वाचन सम्राट पण्डित भिमकान्त पन्थीलाई दियोपोस्ट डटकमका लागि रीता बुढाथोकीको पहिलो प्रश्न थियो– हिन्दु धर्ममा थुप्रै बेथिती, विकृती देखिन्छन । अरु धर्मको तुलनामा हिन्दु धर्म भित्र अन्धविश्वास र जातीय विभेद पनि छ । यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
धर्मको अर्थ नजान्नाले यस्तो भएको हो । अर्थ प्रष्ट नभएपछि धर्मको बिनाश हुन्छ । धर्मको बारेमा ज्ञान नहुनेहरु आफै धर्मको ठेकेदार बनेको अवस्था छ । धर्म भनेको मानिसलाई अनुशासनमा बाँध्ने नीति र सिद्धान्त हो । जस्तै, ट्राफिक नियमको पालना गरिएन भने दुर्घटना हुने निश्चित छ । त्यस्तै, मान्छेले धर्मको पालना गरेन भने मानवको अस्तित्व पनि दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । धर्म नबुझेका धार्मिक भनिनेहरुका कारण हिन्दु समाज उश्रङ्खल र बिखण्डित भएको छ ।
मान्छेले मानवता बिर्सन थाले, धर्म कर्मको अर्थ र महत्व बिर्सिए । पूर्ण मानवीय सिद्धान्त नजानेर मान्छेहरु धर्मका नाममा अधर्म गरिरहेका छन् । अझ भनौँ, जातीय विभेद जस्तो मानवता बिरोधी प्रथा हिन्दु धर्म मान्नेहरुले चलाइहरका छन् । यो सामन्ती समाजको अवशेष हो । मध्य युगमा दास युग आएको हो । दास युगमा कजाएर खाने र कजिएर खाने गरि मानव सभ्यता दुई भागमा बाँढियो । गराएर खाने र गरेर खानेबीच ठूलो अन्तर देखा पर्न थाल्यो । कपडा सिलाउनेहरु नांगै बस्नुपर्ने, घर बनाउनेहरु घरबिहिन हुनुपर्ने, घर बनाउन नजान्ने चाँही ठूला–ठूला महलको मालिक हुने विषम खालको समाजको बिकास भएको पाइन्छ । त्यसपछि, पुरै विश्वमा पुँजिवादी व्यवस्था सुरुभयो । यो व्यवस्था सुरु भएपछि विश्वमा निकै ठूला मानव हिंसा भएका छन् । नेपालमा भने मानव हिंसा कम भएपनि र मानसिक हिंसा बढी भएको देखिन्छ ।
अफ्रिकामा काला जातिका मान्छेलाई बेचेर खाने प्रचलन थियो । त्यहाँ रंग विभेद थियो । गोरा जातीहरुले ह्वाइट पोलिसी ल्याए । त्यहाँ गोराहरु मात्र मान्छे हुन्, कालाहरु नर्कबाट आएका हुन भनेर क्रिश्चियनहरुले विभेद गरेकै हुन् । मुसलमानहरुमा पनि सिया र सुन्नीबीच विभेद छ ।
यिनीहरुमा अहिले पनि काटाकाटको स्थिति छ । ग्रिक सभ्यतामा, युनान सभ्यतामा, मिश्र सभ्यतामा, बेबिलोन आदि सभ्यतामा, युरोप, अमेरिका तथा प्राचिन आदिम संस्कृतिमा पनि विभेद देखिन्छ । यो संसारमा विभेद नभएको कतै छैन । यहाँसम्मकी बेलायतमा त नारीहरुलाई सडकको बीचमा राखेर ढुंगाले हिर्काएर मार्ने प्रचलन थियो ।
यसरी संसारका अन्य समाज हेर्ने हो भने हाम्रोमा त्यस्तो अमानवीय देखिदैँन । जस्तै, पुरानो पुस्तामा हेर्ने हो भने दलित र गैर दलितबीच पुरुषले मित लगाउने, नारीहरुले सैना लगाउने गर्थे । यो प्रचलन अहिले सम्म पनि छ । तर, जन्म जात अछुत भनेर भात पानी तर्काएर युगौंसम्म श्रम र यौन शोषण गर्ने काम चाँही हाम्रो समाजमा भयंकर रुपमा छ ।
यो संस्कार र संस्कृती आफैमा निन्दनीय छ । जातीय प्रथासँग बैदिक सनातन हिन्दु धर्मको कुनै सम्बन्ध छैन । यो प्रथासंग धर्मको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । दास युगमा यो परम्परा जन्मियो । त्यसलाई धर्मको स्वरुप दिएर मान्छेलाई उच–नीचको व्यवहार जुन भएको छ, त्यसको हामी आफै भण्डाफोर गर्छौ । निश्चित वर्ग र जातीलाई युगौंसम्म जोताउँदै, उनीहरुको श्रम शोषण र यौन शोषण गर्ने जुनप्रचलनको विकास भएको छ, त्यसको हामी निन्दा गर्छौ ।
जातीय विभेदलाई धर्मको रुप दिनु कथित ठूला जाती भनिनेहरुको सबैभन्दा ठूलो चलाखी र बेइमानी हो । अझ भनौँ, हिन्दु धर्म भित्र जातप्रथा भित्र्याउनु धर्मप्रतिको महान धोका हो । हिन्दु धर्मको मर्म थाहा नहुने कथित ठूला जात भनिनेहरुले मानव सभ्यतालाई कलंकित बनाए र बैदिक सनातन पवित्र महान उदार धर्मलाई समेत यिनीहरुले अपवित्र बनाउने काम गरे ।
तपाईं आफै यो धर्मको वकालत गर्दै हिँड्नु भएको छ । कसरी भण्डाफोर र पहल गर्नु हुन्छ ?
हिन्दु धर्म मान्नेहरुबीच जुन जातीय विभेद छ, यो संसारको मानव सभ्यता बिपरित छ । कुनै सामाजिक तथा राजनीतिक अभियन्ताहरुको पहलले मात्र जातीय विभेदको अन्य होला भनेर सोँच्नु मुर्खता हो । हिन्दु धर्मका गुरु तथा पण्डितहरु, साधु सन्तहरुले पहल नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन । उहाँहरुले कि त हामी बाहुनको मात्र पण्डित हौँ भन्नुपर्यो ।
होइन, हामी सबै हिन्दु सानतन धर्मका पण्डित हौँ भन्ने हो भने, सबै हिन्दुहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्यो । जातीय आधारमा एक हिन्दुले अर्को हिन्दुलाई हेला गर्नु भएन । एक भाइले अर्को भाईलाई माया गर्नु्पर्यो ।
तर, यहाँ के छ भने, अमेरिकीलाई संस्कृत पढ्न, गुरुकुल जान र धार्मिक कार्य गर्न छुट हुन्छ, तर आफ्नै दाजुभाई सरहका दलितलाई बन्देज गरिन्छ । अहिले अफ्रीकी तथा रसियनहरुले पनि संस्कृत पढेका छन्, उनीहरुले पनि हिन्दु धर्म मानेका छन् ।
पश्चिमी मुलुकतिर हिन्दु धर्मालम्बिहरुको संख्या बढिरहेको छ । तर, आफ्ना भाई सरहका हिन्दु धर्म अंगालेका दलितहरुले संस्कृत पढ्न खोज्यो भने गुरुकुलमा ताला लागाएर बस्ने हाम्रो जुन मानसिकता छ त्यो अत्यन्तै घातक छ । वर्षौदेखि हिन्दु धर्म मान्दै आएका आफ्नै दाजुभाइलार्ई अछुतको दर्जा दिएर विभेद गर्ने जुन परम्परा छ, त्यो गलत छ । त्यसको अन्त्य नभएसम्म धर्ममा समानतता आउँदैन ।
पछिल्लो अवस्थामा फिलिपन्स आदि देशहरुबाट त्यहाँका छोरी-चेलीहरु हाम्रोमा बुहारी बनेर आउने चलन व्यापक छ । नेपालका सबै जात र वर्गको घरमा उनीहरु बुहारी बनेर आउने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुका हातको भात पानी सबैलाई चलेको छ ।
तर, कथित तल्लो जात भनिनेसंग बिहे गरेर आयो भने उसलाई पनि विभेद गरिन्छ । जातै नभएका पश्चिमीहरु, जसले सनातन धर्म मानेन्, जसले गौ हत्या गर्छन् तिनीहरु विपरित संस्कृतिका बिधर्मीहरु हाम्रोमा आएर सम्मानित हुने, तर युगौँदेखि रगत र पसिना साटेर यो समाजलाई गति दिएका दलित तथा शिल्पी समुदायहरु भने अछुत हुने ? एउटै कुलबाट आएका, एउटै बाजेका सन्तती, एउटै रगत, एउटै धर्म मान्ने आफ्नै दाजुभाइलार्ई अछुत भन्न सुहाउँछ ? यो त अत्यन्तै दुख लाग्दो कुरा होे ।
हिन्दु धर्म मान्ने दलितहरुले भन्दा अन्य धर्म मान्ने ठूला जात भनिनेहरुले नै बढी सम्मान पाएको अवस्था छ । आफ्नै कुलका भाई बन्धुलाई हेला गर्ने, चिथोमिचो गर्ने जुन चलन छ, त्यो धर्म बिरोधी कार्य हो ।
अहिलेसम्म धर्ममा कथित वर्गले एकल अधिकार जमाएका छन्, त्यो एकल अधिकारको जकडिएको माखे साङ्लो जुन दिन तोडिन्छ, त्यो दिन नेपालमा जातीय विभेदको अन्त्य हुन्छ । हामी धर्म गुरुहरुले ‘हामी हिन्दु धर्म मान्नेहरु सबै बराबर छौँ’ भनेर अभियान चलाउने, विभेद नगर्ने, जो हेपिएको, चिथिएको र तल पारिएको वर्गहरु छन् उनीहरुले संस्कृत पढ्ने, धर्म शास्त्र र ग्रन्थ पढ्ने, जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ कानुनको सहारा लिएर विभेदका बिरुद्ध बोल्ने र आफ्नो वर्गमा पण्डितहरु उत्पादन गरेर धर्ममा भएको एकल अधिकारलाई तोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
यसलाई मौलिक संस्कृतिकरण र विभेदको अन्त्य भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि कथित ब्राम्हणहरुले पनि विभेदको मासिकता त्याग्नपर्यो । हामी धर्म गुरु तथा पण्डितहरुले धर्मभित्र भएका गलत पक्षलाई चिर्न सक्नु्पर्यो । जो, हेपिएको र थिचिएको वर्ग समुदाय छन् तिनीहरु पनि माथि उक्लिने प्रयास गर्नपर्यो । दलितहरु धर्म शास्त्ररुपी भर्याङ चढ्ने प्रयास गर्नपर्यो ।
दलित मुक्ति आन्दोलन त १५ औँ शताब्दिदेखि नै चलेका हुन् । तर, अहिलेसम्म समस्या उस्तै छ । कारण दलितहरुले धार्मिक सत्ता ग्रहण गर्न सकेनन् । न त गैर दलितले उनीहरुलाई धार्मिक सत्ता हस्तान्तरण गर्नसके ।
जुन दिन विभेदमा परेका समुदायलाई धार्मिक सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ, त्यो दिन विभेद स्वत हटेर जान्छ । यसको अरु कुनै बिकल्प छैन । सम्पूर्ण दलित अधिकारकर्मीहरु, दलित मुक्ति अभियन्ताहरु तथा यो समाजलाई स्वर्ग बनाउन जुट्नु भएका सबै प्रति मेरो यही निवेदन छ, कम्तीमा पनि समस्याको जरोसम्म पुगौँ र निराकरण गरौँ ।
एकाथरी धर्मगुरुहरुले वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाजलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । विभेद जायज हो भन्ने आसय उहाँहरुको छ । तर तपाईंहरु विरोधमा हुनुहुन्छ । यहाँ त बेमेल देखियो नि?
जसले युगौँ–युगदेखि ठगेर खान पाएको छ, जातका आधारमा लुट्न पाएको छ, उसले समाज सुधार हुन कहाँबाट दिन्छ ? जसले दलितलाई लुटेर खान पाएका छन् तिनीहरुले दलितको मुक्तिका बारेमा कसरी सोँच्न सक्छन् ? मानौँ, कथित विश्वकर्मालाई गाउँमा कामी भनेर हेला गर्छन । फलामको काम गर्ने कामीहरु अत्यन्तै कडा मेहनत गर्छन । कर्मशिल र कडा मेहनती भएकै कारण उनीहरु कामी भएका हुन् । तर, उनीहरुको श्रमको मुल्य छैन । वर्षको एक पाथी कोदो र मकैमा वर्ष भरि फलाम पिटिरहनु पर्ने वाध्यता छ ।
दमाइहरु बिना ज्याला वर्षभरि कपडा सिलाउन र बाजा बजाउन पर्ने वाध्यतामा छन् । कथित सार्की समुदायले आफु नांगै पाइताला हिँडेर अरुलाई वर्षैभरि जुत्ता सिलाएकै छन् । गन्दर्भ जातीहरु इतिहाँसदेखि नै समाजका प्रत्येक घटनालाई गीत बनाएर गाउँदै हिँडे । एउटा समाजको यथार्थ अर्को समाजसम्म गीतमार्फत पुर्याउने ऐतिहासिक कलाकार गन्दर्भ जातीहरु कसरी दलित भए ? दलितहरु त ती हुन् जसले ऐतिहासिक श्रमजिवी, कलाका धनी, र संसारको रचना गर्ने जाती र समुदायलाई अछुत बनाएर उनीहरुको श्रम शोषण गरेका छन् । यसरी दलितहरुलाई हेपेर, ठगेर खान पाइएको जो छ, यही मानशिकताका कारण दलितहरुलाई धर्म भित्र पनि अपमानित बनाइराख्ने र उनीहरुलाई लुटेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अभिप्रायले केही हिन्दु धर्मका अगुवा अथवा धर्म गुरु भनिनेहरु हिन्दु धर्मभित्र जात प्रथा टिकाइरहन चाहान्छन् ।
एउटा निश्चित जात र समुदायलाई ठगेर, हेपेर र श्रम शोषण गरेर खान पल्केकाहरुलाई ‘हामी सबै एउटै हौँ, हामी सबै समान छौँ’ भन्यो भने, उ रिसाउनु स्वभाविकै हो । धर्मशास्त्र नपढे पनि व्राम्हण समुदायको छोरा पण्डित हुने, जति पढे पनि दलितको छोरा दलित नै रहने जुन अस्वभाविक र असमान प्रबृति छ, त्यसले समाजलाई अझै बिखण्डन तिर लैजाँदै छ ।
समाजमा लुट मच्चाउनेहरु, धर्मका नाममा ठगेर खान पल्लेकाहरुले मेरो बिरोध गर्छन । यो जातीय ब्यवस्था हिन्दु धर्ममा छैन, हिन्दु समाजमा मात्र छ । यिनै पुस्तौँदेखिका ठग र सामन्तीहरुले नै यो जातीय प्रथालाई टिकाइराख्न चाहान्छन् । उनीहरुमा पनि बिस्तारै चेतना बिस्तार हुँदैछ । हामी सुधारवादी गुरुहरु जो छौँ, हाम्रो अगाडी आएर बिरोध गर्न सक्दैनन् । यिनीहरुलाई हिन्दु धर्म शास्त्रको बारेमा ज्ञान नै छैन ।उनीहरु बाहिर बाहिर बिरोध गर्छन् । ज्ञान नभए पछि जे बोले पनि त भयो नि । बेदले समेत संसारका सबै मानिस एक भएर बस भन्छ । हिन्दु धर्मले मात्र मान्छे बन भनेको छ ।
संसारकै सबैभन्दा सभ्य, सुशिक्षित, असल र पृथ्वीको सबै प्राणीहरुलाई समानता सिकाउने धर्म नै हिन्दु धर्म हो । अनि हिन्दु धर्म कसरी विभेदकारी धर्म हुन सक्छ ? हिन्दु धर्म त संसारकै सबै भन्दा उदार धर्म हो । यति राम्रो धर्मलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्दै धर्ममा जातीप्रथा मिसाउने जुन कार्य भएको छ, त्यसको हामी खुलेर बिरोध गछौँ । युगौँदेखि हाम्रा आफ्नै कुलबाट आएका दाजुभाइलाई दलित बनाएर हेप्न पाएकाहरुलाई हाम्रा करा सुन्दा ज्वरो आउँछ । ज्वरो आएपछि मान्छे बरबराउँछ । उनीहरु पनि ज्वरो आएर बरबराएका हुन् । हाम्रो अभियान जारी छ, जबसम्म हिन्दु धर्म भित्र समानता स्थापना हुँदैन तबसम्म हामी यसरी नै लागिरहन्छौँ ।
हिन्दु धर्मको कर्म बिपरित धर्ममा जात व्यवस्था टिकाइराख्न कसैले खोज्छ भने, उसको अन्त्य जरुर छ । कि यो समाजबाट उनीहरु निष्काशित हुन्छन् । कि सबैलाई सम्मान गर्दै दलित भनिएका आफ्ना दाजुभाइहरुलाई पनि समेट्ने महाअभियानमा लाग्छन् । जसले समेट्ने होइन भन्छन्, उनीहरु आफ्नो घरको चुकुल लगाएर घरभित्रै बसे हुन्छ । बाहिर नआए हुन्छ ।
पृथ्वी कसैको बाउको विर्ता होइन । पृथ्वीमा भएका पञ्चतत्वहरु सबैका लागि बराबर छन् । जात, धर्म, वर्ण, लिंग, क्षेत्र र वर्गका आधारमा कसैले कसैलाई हेप्ने र उपेक्षा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो पृथ्वी सबैको साझा सम्पत्ति हो । यसमा सबैको बराबर अधिकार छ । पृथ्वीमा रहेर कसैले कसैलाई हेप्छ, उचनीचको ब्यवहार गर्छ भने उ बाहिर निस्किन भएन, आफ्नै घरभित्रै बसेहुन्छ । कुनै हिन्दुले अर्को हिन्दुलाई विभेद गर्छ भने विभेद गर्नेलाई धर्मबाटै बहिस्कार गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई धार्मिक संगठनले कार्बाही गर्नुपर्छ । कानुन आफ्नो ठाउँमा छ, राज्य सरकार आफ्नो ठाउँमा छ, कुनै पनि ठाउँमा कसैले विभेद गर्छ भने हामी धार्मिक संगठनको तर्फबाट पनि कार्बाही गर्छौँ । तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्, एउटा हिन्दुले अर्को हिन्दुलाई जात धर्मका आधारमा विभेद गरेको खण्डमा हामी आफै त्यसका बिरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिन्छौ ।
पछिल्लो पटक रुकुममा भएको जातिय हिंसाको विरोधमा तपाईंहरु किन चुप बस्नु भयो त ?
नवराज बिक र तिनका साथीहरु मात्र होइन मुलुकमा जातीय कारणले थुप्रैको हत्या भएको छ । यो त सामुहिक हत्या भएका कारण ठूलो देखिएको हो । त्यहाँ मारिनेहरु मध्य गैर दलितहरु पनि थिए । यस्ता घटना दिनानुदिन भइरहेका छन् । रुकुममा घटना भएको केही दिनपछि देबदहमा अंगिरा पासी नामकी चेलीको हत्या भयो । उनी दलित भएकै कारण अपराधको शि बनेकी हुन् । उनी मारिएको कुराले भन्दा पनि उनले न्याय नपाएको कुराले मेरो मन पोल्छ ।
रुकुमकै कुरा गरौँ, त्यहाँ नवराज र उनका साथीहरु मारिए । रुकुमको घटनामा नबराज बिकको प्रेमिका भनिने सुष्मा शाहीले आफ्नो प्रेमी आफैले बोलाएको र गाउँलेहरु मिलेर लखेटेर हत्या गरेको बुझिन्छ । सुष्माले घरमै बोलाउनुको सट्टा नबराजलाई बीच बाटोसम्म बोलाएर आफै घरबाट निस्केको भए शायद यो घटना हुनै नै थिएन । यसमा मैले सबैभन्दा ठूलो दोष सुष्माकै देख्छु । अपरिपक्क प्रेम सम्बन्ध र जातीय विभेदका कारण रुकुममा नरसंहार भयो । शायद यो घटना २१ औँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो घटना हो । यो घटनाले मानव मर्यादाको खिल्ली उडाएको छ ।
घटना भए लगत्तै हामीले पश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्र अथवा ५ नं. प्रदेश स्तरीय विश्व हिन्दु महासंघको कार्यक्रम गरेर बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्यौँ । बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दा पनि जो दलित समुदायका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु तातेर आउनु भएन । उहाँहरुको सक्रियता देखिएन । समस्या यहाँ पनि छ । रुकुम घटनालाई लिएर मैले बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर पहल गरेँ । रुकुम घटनाको बिषयमा मैले विश्व हिन्दु महासंघबाट प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्न लगाएँ । बुटबल घोषणा पत्र जारी गर्दा दलित समुदायका प्रतिनिधि, ब्राम्हण समाजका प्रतिनिधि लगायत विश्व हिन्दु महसंघ मिलेर बृहद कार्यक्रम गरेका थियौँ ।
हामीले जारी गरेको घोषणा पत्रलाई विश्व हिन्दु महासंघ, ब्राम्हण समाज लगायतले समर्थन गरे । तर, त्यसलाई लागु गर्ने काम चाँही भएन । किनकी लागु गर्ने बेलामा धार्मिक सत्ता र राजनीतिक सत्तामा दलितहरु भएनन् । दलित अगुवाहरुले पनि खासै चासो देखाएनन् । त्यसकारण आम उपेक्षित बर्ग र समुदायले संस्कृत पढ्नुपर्छ, दलितहरुका पनि पण्डित उत्पादन गर्नुपर्छ र धार्मिक सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भनेर मैले जोड दिएको हुँ । न्यायालयमा जाँदा पनि उपेक्षित वर्ग समुदायको न्यूनता देखिन्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । धार्मिक क्षेत्रमा त झन् शुन्य नै छ । त्यसकारण हामी दलित समुदायलाई धार्मिक सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहान्छौँ । उहाँहरु आफै खुलेर आउनु पर्यो । म आफै पनि धेरै दिनसम्म रुकुम घटनाको बिरोध कार्यक्रममा सहभागी भएको छु ।
अंगिरा पासीलाई दलित भएकै कारण आफ्नै प्रेमीले झुड्याएर हत्या गरे, अंगिराले अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैनन् । यदि न्यायालयसम्म दलितको राम्रो पहुँच हुन्थ्यो भने न्यायको भिख माग्दै हिड्नु पर्ने थिएन । जनकपुरमा त्यस्तै घटना भयो । कैलालीमा भयो, पोखरामा भयो । पछिल्लो समयमा लगभग आधा दर्जन बढी हत्याका जघन्य घटनाहरु दलित भएकै कारण भएका छन् । यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
म ब्राम्हण समुदायको मात्र होइन सबै हिन्दुहरुको धर्म गुरु हुँ । सबै वर्ग समुदायलाई समान ब्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि आम शोषित पीडितका पक्षमा आवाज उठाउँछु । कति कार्यक्रममा त मैले मनुस्मृति धर्म शास्त्र होइन भनेर बोल्दा मेरै बिरोध भएको छ । मनुस्मृतिको त म आफै बिरोधी हुँ ।
हाम्रो समाजका ब्राम्हण समुदायमा कुहिएको दुर्गन्धित मस्तिष्क छ । जब कुनै बस्तु कुहिन्छ नि, त्यसपछि गन्हाउन थाल्छ । त्यस्तो खालको बिकृत र दुर्घन्धित मानशिकताले हामीहरु रोगी भएका छौँ । वास्तवमा जातीय विभेद समाजको क्यान्सर हो । यो विभेदरुपी क्यान्सरको उपचार बेलैमा नगरे समाज अझै कति वर्षसम्म ग्रसित भइरहनु पर्ने हो थाहा छैन । जातरुपी क्यान्सर निर्मुल पर्ने यो महान अभियानमा हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट ऐक्यवद्ध हुनु पर्छ । जातीय विभेद त मानव अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेल हो । यतिबेला मानव अस्तित्व खतरामा छ । रुखमा ऐजेरु लाग्यो भने रुख सुक्दै जान्छ र अन्त्यमा रुख मर्छ । त्यस्तै, जातीय विभेद पनि समाजको ऐजेरु हो । जातीय विभेदरुपी ऐजेरुले हाम्रो सनातन सत्धर्मरुपी बृक्षलाई मार्ने कोशिस गरेको छ, यसलाई बचाउनु पर्छ ।
हिन्दु धर्म भित्रकै विकृत संस्कृतिका कारण दलितहरुमा धर्म परिवर्तनको लहर छ नी ?
यसमा मेरो धारणा अलि बेग्लै छ । मैले कुनै पनि धर्मलाई गाली गर्दिन । मैले बाइबल पढेको छु, कुरान लगायत विश्वका थुप्रै धर्म ग्रन्थको अध्ययन गरेको छु । हामीले धर्मप्रति निषेधको निति अपनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नै धारणा छ । अहिले पनि पश्चिमा मुलुकहरुमा हिन्दुहरु बढेको अवस्था छ । संसारका हरेक ब्यक्तिले आफ्नो ईच्छाअनुसार धर्मको अनुशरण गर्न पाउनुपर्छ ।
नेपालमा पनि धर्म परिवर्तनको लहर चलेको छ । हिन्दुहरु क्रिश्चियन बन्ने होडबाजी छ । कतिपय हिन्दु धर्मका धार्मिक गुरुहरु ईसाइहरुलाई कुट्नु पर्छ, मुस्लिमहरुलाई पनि लखेट्नु पर्छ, अन्य धर्मालम्बीहरुलाई तह लगाउनु पर्छ भन्ने खालको निषेध मानसिकताबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ।
यो धर्ति सबैको हो, यो धर्तिमा सबै खाले धर्म मान्नेहरुको बराबर अधिकार छ । तर, ईसाई धर्मका धर्म गुरुहरु जसलाई पास्टर भनिन्छ, उहाँहरुको धर्म प्रचार गर्ने शैली गलत छ । मान्छे रोग लागे पछि अस्पताल जानु पर्छ । तर, इसाई धर्मका गुरुहरुले चर्चमा गए पछि ठिक हुन्छ भनेर भ्रम फैलाउनु भएको छ । केहीदिन अघि मात्र भरतपुरमा अस्पतालमा मृत घोषणा गरेको बच्चालाई देवघाटमा लगेर गाडिएको रहेछ ।
क्रिश्चियन धर्ममा विश्वास गर्ने मृत बच्चाकी आमाले आफ्नो मृत बच्चा गाडेको ठाउँमा गएर बच्चा निकालिन । परमेश्वरको प्रार्थना गरेपछि आफ्नो बच्चा पून जिवित हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासले उनी बच्चालाई जिवित बनाउन परमेश्वरको प्रार्थना गर्न थालिन् । उनले घण्टौसम्म रोईकराई गर्दै प्राथना गरिरहिन् । तर, त्यहाँ प्रभुको कुनै चमत्कार भएन । बच्चा ब्युँझिएन । सामाजिक संजालमा त्यो दृश्य अत्यन्तै हृदयबिदारक थियो । यस्तो खालको भ्रम छरेर धर्म टिकाइराख्ने जुन शैली छ, यो गलत छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
त्यसो त, हिन्दुु धर्ममा पनि कथित धामी–झाक्री, बोक्सी प्रथा छ भन्ने सवाल आउन सक्छ । यसमा पनि मेरो भनाई यही हो, रोग लागेपछि अस्पताल जानुपर्छ । उपचार गरे निको हुन्छ । अन्धविश्वास र भ्रमले मान्छेको ज्यान जान सक्छ । आखिर, विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरालाई कसैले नकार्न मिल्दैन । हिन्दु धर्म विज्ञानमा आधारित धर्म हो । रह्यो कुरा विभेदको । विभेद त क्रिस्चियन धर्ममा पनि छ । सल्यानमा ब्राम्हणहरु जाने चर्च र दलितहरु जाने चर्च छुट्टा छुट्टै छन् । त्यहाँ मात्र नभएर देशका विभिन्न क्षेत्रमा बेग्ला–बेग्लै चर्च प्रयोग गरेको मैले देखेको छु । त्यसकारण, मैले कसैलाई हिन्दु नै बन भनेर आग्रह गर्दिन र क्रिश्चियन धर्म नमान भनेर पनि भन्दिन । धार्मिक स्वतन्त्रता सबैमा लागुहुन्छ ।
एक धर्मले अर्को धर्मलाई निषेध गर्नु हुँदैन । हामी धार्मिक सहिष्णुतामा विश्वास गर्छौ । । तर, जुनसुकै धर्ममा गएपनि जातीय विभेदको अन्त्य हुनु मुख्य सवाल हो । जातीय विभेद अन्य धर्म मान्नेहरुमा छ । क्रिश्चियन धर्म मान्ने ब्राम्हणले र त्यही धर्म मान्ने दलितलाई विभेद गरेको प्रस्टै देखिन्छ । उनीहरुसंगै बसेर खाने बाहेक विवाह गर्ने अवस्थामा अझै पनि पुगेका छैनन् ।
अर्को कुरा, क्रिश्चियन धर्ममा विश्वास गर्नेहरुबाट दशांस (कमाइको १० प्रतिसत) भेटी उठाउने भनिएको छ, त्यसबाट धेरै इसाईहरु हिन्दुमै फर्किएको पनि पाइएको छ । हिन्दु धर्ममा जातीय विभेद खेपेर क्रिश्चियन भएकाहरु दलित र गरिबहरु ईसाई भएपछि झनै ठूलो आर्थिक दमन र सामाजिक विभेद खेप्न बाध्य छन् । यसले झनै ठूलो आर्थिक खाडलको सिर्जना गरेको छ । दलित क्रिश्चियनको छोरीलाई गैर दलित क्रिश्चियनको छोराले मागेर विवाह गरेको रेकर्ड छैन । क्रिश्चियन धर्म मान्ने दलितहरुले दलित क्रिश्चियन महासंघ भन्ने संगठन नै खोलेका छन् । त्यहाँ पनि विभेद छ । मान्छे जन्मिदा स्वतन्त्र जन्मिन्छ र स्वतन्त्र भएरै मर्न चाहान्छ । बाँचुन्जेल मान्छेलाई धर्म चाहिन्छ । धर्मलाई मान्छे चाहिएको होइन । बिना धर्म पनि मान्छे बाँच्दछ । यो कुरा बेदमा स्पष्ट लेखिएको छ । संसारमा धर्म बिना पनि मान्छे बाँच्न सक्छ तर, मान्छे बिना धर्म रहँदैन ।
अनुशासनमा रहेर बाँच्नु, एक मानवले अर्को मानवलाई सम्मान गर्नु, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु र अदृश्य शक्तिप्रति समर्पित बनाएर मान्छेलाई सभ्य, शालिन र सुशिल बनाउने धर्मको मुल उद्देश्य हो । त्यसकारण मान्छेलाई धर्म आवश्यक छ । यसरी धर्ममा तानातानको स्थिति, गाली गलौजको स्थिति हुनु हुनुहुँदैन । धर्मका नाममा लुट, दमन र फुट जुन छ, यो अमानविय छ । एक आपसमा काटाकाट, मारामार, राग, द्वेष, छलकपट भएपछि के को धर्म ? यो त सबै धर्मलाई लागु हुने नियम हो नि त । म त भन्छु जुनसुकै धर्म माने पनि सबैभन्दा पहिले मान्छे बन्न सिक । मानवता बिरोधी कार्य कसैले नगर । धार्मिक बन्नु भन्दा पनि मान्छे बन्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
केहीदिन अघि बाग्लुङ स्थित गुरुकुलमा पण्डित चन्द्रकान्त आचार्यले दलितले पढ्न पाउनु पर्छ भनेर भन्दैगर्दा उहाँमाथि आक्रमण भयो । यस घटनालाई चाँही कसरी लिनु भएको छ ।
संसारमा जातीय र वर्गीय आरक्षण सबै ठाउँमा रहेछ । बाहुनले मात्र बेद पढ्ने, बाहुनले मात्र संस्कृत पढ्ने, बाहुनले मात्र पुजापाठ गर्ने, बाहुनले मात्र पुराण लगाउने भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यसैको उपज नै बागलुङको घटना हो ।
चन्द्रकान्तले समाज सुधारका लागि र दलित मुक्तिका लागि कदम चाल्न खोजेका थिए । तर, पुस्तौँदेखि दलितलाई ठग्दै आएका त्यहाँका कथित ब्राम्हणहरुले चन्द्रकान्तमाथि आक्रमण गर्न पछि परेनन् । ‘चन्द्रकान्तले दलितलाई उचाल्यो’ भन्ने आरोप लगाए ।
दलितले संस्कृत पढ्यो भने उनीहरुलाई ठग्न नपाईने भयो नि त । त्यसैले उनीहरुले बिरोध गरेका मात्र हुन् । दमाई, कामी, सार्की तथा अन्य दलितले बेद पढे भने गुरुकुल कब्जा गर्नेछन् र आफुहरुले खाइपाई आएको, गुरुकुलमा राज गरी ठग्ने बाटो बन्द हुने भयो भनेर ब्राम्हण समुदाय भयभित भएको अवस्था छ । युगौँदेखि ठगी खान पल्केका समामन्तीहरुलाई ज्वरो आयो । ज्वरो आएपछि मान्छे बरबराउँछ भनेर मैले पहिल्यै भनेको छु । त्यहाँ पनि यही भएको हो । बागलुङका ब्राम्हण समुदायका मान्छेहरु बरबाराएका हुन् ।
चन्द्रकान्तले उठाएका मुद्धालाई लिएर मैले विश्वहिन्दु महासंघमा पनि जानकारी गराएको छु । चन्द्रकान्तमाथि भएको आक्रमणको घोर निन्दा गर्दै मैले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेको थिएँ । मैले झकझकाएपछि पोखरास्थित विश्व हिन्दु महासंघ ४ नं. प्रदेश कार्यालय पोखराले ‘चन्द्रकान्त आचार्यले उठाएका मुद्धा ठिक छन्, अबदेखि नेपालमा कुनै गुरुकुलमा गुरुकुलको मर्यादामा रहनेगरि पठनपाठन गर्न सबै जातजातीलाई खुल्ला गरिएको छ’ भनेर निर्णय गरेको छ । नेपालमा चन्द्रकान्त जस्ता सयौँ धर्म गुरु जन्मिनुपर्छ । सबै विद्यापीठमा एकछत्र रुपमा एकलजातीय हालीमुहाली जो छ, त्यसलाई तोड्नु जरुरी छ ।
जुन पण्डितले जातीय विभेद गर्छ, दलितको कर्मकाण्ड गर्न मान्दैन त्यो पण्डितलाई सधैभरिका लागि कर्मकाण्ड गर्नका लागि बन्द गराइदिने निर्णय हामीले सल्यानको श्रीनगर घोषणा पत्रमा समेत उल्लेख गरेका छौँ ।
नेपालमा जातिय विभेद कहिलेसम्म अन्त्य होला ?
म मात्रै बोलेर, मैले एक्लैले पहल गरेर केही हुँदैन । पण्डित छविलाल पोखरेलको जिन्दगी यसैमा बित्यो । पण्डित नारायण पोखरेल गुरुको जिन्दगी यसैमा बित्यो । अझ उहाँको त हत्या नै भयो । कथित दलित भनिनेबाटै उहाँको हत्या भएकोे थियो । योगी नरहरिनाथको जिन्दगी यसैमा बित्यो । डा.स्वामी प्रपन्नचार्यको जिन्दगी पनि यसै गरि समाप्त भयो । म मात्र होइन, धेरै धर्मगुरुहरुको जिन्दगी यसै गरि बित्नेवाला छ । मैले मात्र होइन, धेरै धर्म गुरुहरुले हिन्दु हिन्दुबीच जातपात उचनीचको ब्यवहार हुनु हुँदैन, सबै बराबर हौँ भनेर भन्नु भएको छ । तर, खुलेर बोल्ने, लेख्ने र विभेदका बिरुद्ध अभियान चलाउने पछिल्लो समय म मात्र हुँ ।
मैले दलित र गैर दलित बीचका थुप्रै विवाह सम्पन्न गराएको छु । यसलाई अन्तर्जातीय विवाह पनि भन्ने गर्छन् । तर, यो अन्तर्जातीय विवाह होइन । हिन्दुले हिन्दुसंग विवाह गर्दा कसरी अन्तर्जातीय हुन्छ ? हामी त एउटै जाती हौँ । खस आर्य समुदाय अन्तर्गत चुच्चा नाकेहरु हौँ । हिन्दुले क्रिश्चियन या अन्य धर्म मान्नेससंग विवाह गरेको भए पो अन्तर्जातीय हुन्छ त ।
सबै जातीहरु एकै हुन्, जातीय विभेद हुनु हुँदैन भनेर अभियान चलाउँदा, दलित र गैर दलितबीच विवाह गराउँदा ममाथि थुप्रै आक्रमणका प्रयास भएका छन् । ममाथि ढुंगा बर्सिए । मलाई मार्ने प्रयास भयो । तर, पनि यो अभियानबाट म कत्तिपनि बिचलित भएको छैन ।
ममाथि आक्रमण हुँदा मेरो चित्त दुखाई भएन । मेरो चित्त दुखाई कहाँनेर हो भने, जुन उत्पीडित समुदायहरु छन्, उनीहरु हाम्रो कुरै सुन्न चाहान्नन् । दलित मुक्ति अभियानमा लाग्नु भएका अभियन्ता साथीहरुले अन्यथा नलिनु होला, दलित समुदाय भित्र एउटा ठूलो रोग छ । त्यो रोग भनेको हाम्रा कुरा नसुनिदिने र एन.जि.ओ, आइ.एन.जि.ओ.ले पैसा बाँढेर संचालन गरेका कार्यक्रममा सहभागी भइदिने अनि त्यतैपट्टिी लाग्ने । प्रस्टै भन्नु पर्दा दलित मुक्ति आन्दोलन पैसामा बिकेको छ । यसखालको प्रवृत्तिले दलितहरु मागी खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग भएका छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति त्यसै हुँदैन । चन्द्रकान्तको पक्षमा मैले आवाज उठाउँदा मेरो समेत बिरोध भएको छ । तर, देशभरका दलित र दलितसंग सम्बन्धित संघ–संगठनले एउटा प्रेस बिज्ञप्ती समेत जारी गरेनन् । यो त अत्यन्तै दुखको कुरा हो नि । यसरी हेर्दा दलित संस्थाहरुले नै दलितलाई ठगेको अवस्था छ ।
ब्राम्हणहरुले यो अभियानलाई स्वीकार गरेनन् भनेर मेरो चित्त दुखेको छैन । किनकी, उनीहरु युगौँदेखि यही आधारमा बाँचेका छन्, उनीहरुलाई दलितको मुक्ति भए पनि, नभए पनि खासै असर पर्दैन । तर, म त धर्मसंगै सामाजिक अन्तर्घुलनको अभियानमा छु नि । मैले चन्द्रकान्तलाई पूर्ण समर्थन गर्दै यो आन्दोलनबाट टाढा नजान आग्रह गरेको छु ।
चन्द्रकान्तको साथ दिएकै कारण देशभर मेरो बिरोध भएको छ । सामाजिक संजालमा तपाइंहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ छताछुल्ल रुपमै मेरो बिरुद्धमा असन्तुष्टिहरु पोखिएका छन् । तर, चन्द्रकान्तको पक्षमा दलितहरु किन एकजुट हुन सकेनन् ? मेरो यसमा चित्त दुखाइ छ । दलितहरु राजनीतिक दलका पुच्छर भएका छन् । एन.जि.ओ.,आइ.एन.जि.ओ.द्वारा खरिद भएका छन् । यो धर्मसंग जोडिएको सवाल भएका कारण यो समस्याको समाधान हिन्दु धर्मभित्रैबाट खोजौँ भनेर मैले आग्रह गरेको छु ।
दलितहरु भकुन्डो जस्तै एता र उता नचाइएका छन् । कहिले कांग्रेसले भकुण्डो हान्छ, कहिले राप्रपाले हान्छ, कहिले एमालेले हान्छ । १० वर्षसम्म माओवादीले हाने, बन्दुक भिराए आफु सत्तामा पुगे । अहिले नेकपाले भकुण्डो हान्दैछन् । यसरी हेर्दा दलितहरु प्रयोग मात्र भएका छन् । शासित मात्र भएका छन् । उनीहरु कहिल्यै शासक हुन सकेनन् । सम्पूर्ण दलित समुदायलाई मेरो आग्रह छ, तपाईहरुको मुक्ति सम्भव छ । यो धर्म, संस्कृति र सभ्यतामा तपाइंहरुको पनि बराबर हक छ । तपाईंहरु पनि सनातन कालदेखि नै हिन्दुहुनुहुन्छ । तर, कसैबाट प्रयोग नहुनुस् । तपाईहरुले सम्पूर्ण धार्मिक सत्ता हातमा लिनुस् तपाईको मुक्ति सम्भव छ । मैले लेखेरै दिन्छु, ५० जना मान्छेले मात्रै १० वर्ष धार्मिक अभियान चलाउने हो भने जरैदेखि छुवाछुत हटेर जान्छ । मैले एक कार्ययोजना नै बनाएको छु, मेरो कार्ययोजनामा सबैले साथ दिने हो भने पूर्ण रुपमा छुवाछुत हटेर जान्छ । यो मेरो ठोकुवा हो ।
र, अन्त्यमा सबै दलित समुदायलाई मेरो आग्रह के छ भने, कृपया तपाईहरु आउनुस, तपाई हामी संगै बसेर संस्कृत पढौँ । तपाईहरुले पढ्नु भएन भने, पुस्तौँदेखि खाईपाई आएका ब्राम्हणहरुले धार्मिक सत्ता छोड्ने छैनन् । त्यसैले कृपया तपाईहरु धार्मिक मुलधारमा आउनुस्, धर्मग्रन्थमा, मठ मन्दिरमा कब्जा जमाउनुस् । मन्दिरको ढोकामा बसेर हामीलाई टिका लगाइदिएनन् भनेर नरुनुस् । यो धर्म, संस्कृति, मन्दिर, गुरुकुल तपाइंहरुको पनि हो । धर्म र सभ्यता मास्ने होइन, यसको रक्षार्थ अगाडी आउनुस । धर्मसंग बिद्रोह होइन, बिकृतिसंग बिद्रोह गरौँ । अनि मात्र हाम्रो धर्म पनि जोगिन्छ । हिन्दु धर्म, संस्कृति र सभ्यतामाथि कब्जा जमाएर तपाईहरु नेतृत्व लिनुस्, समाजमा भएको जातीय विभेद स्वत अन्त्य भएर जान्छ ।
आफ्नो घरको छानो चुहिने भयो भन्दैमा अरुको घरमा शरणार्थी हुन जाने होइन । आफ्नै घरको छानो टाल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । तपाईमाथि जातीय हिंसा तथा विभेद भयो भने हामीलाई खबर गर्नुस् । पुलिस प्रशासनले कारवाही गर्न आनाकानी गरेको खण्डमा विश्व हिन्दु महासंघले तुरुन्तै कार्बाहीको प्रकृया अगाडी बढाउनेछ । हामी तपाईहरुकै पक्षमा छौँ । तपाईंहरुको मुक्तिका लागि हामी यथासंभव तयार छौँ । तपाईहरु पनि तात्तिनु पर्यो । अगाडी आउनु पर्यो । एक हिन्दुले अर्को हिन्दुलाई विभेद नगरोस् भन्ने मेरो पबित्र इच्छा हो । यही अभिष्ट पुरा गर्न म लागी परेको छु । मलाई आशा छ, तपाईहरु सबैले मेरो साथ दिनु हुनेछ । नारायण ।